နေပြည်တော်ရှိ Data Center Room နှင့် Rack Room ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ထရန်စဖော်မာတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (ဧရာ၀တီမြစ်၀ှမ်းဘက်စုံစီမံကိန်း) | Myanmar Tender Portal
နေပြည်တော်ရှိ Data Center Room နှင့် Rack Room ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်း၊ ထရန်စဖော်မာတပ်ဆင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း (ဧရာ၀တီမြစ်၀ှမ်းဘက်စုံစီမံကိန်း)
Tender ID: 10276
တင်ဒါကာလ: August 20, 2020 - September 16, 2020
Credit No. : 5559-MM.
Contract Title : Data Center Room and Rack Room Renovation, and Distribution Transformer Installation in Nay Pyi Taw DMH Office,
Reference No. CW2.2.
ပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး၀န်ကြီးဌာန၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနမှ အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော ဧရာ၀တီမြစ်၀ှမ်းဘက်စုံစီမံကိန်း၊ စီမံကိန်းကြီးကြပ်ရေးရုံးအတွက် လိုအပ်သောနေသော အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ငန်းများအတွက် စိတ်ပါ၀င်စားသူလုပ်ငန်းရှင်များမှ တင်ဒါပေးသွင်းနိုင်ပါသည်။
Lot 1 : Data Center Room and Rack Room Renovation in Nay Pyi Taw DMH Office.
Lot2: Distribution Transformer Installation in Nay Pyi Taw DMH Office
စိတ်ပါ၀င်စားသူများအနေဖြင့် တင်ဒါနှင့်ပတ်သတ်သော သတင်းအချက်အလက်အသေးစိတ်ကို ဒေါ်အိကြည်ပြာစိုး (သို့) ဦးအောင်မင်း (၀ယ်ယူရေးအရာရှိ)၊ အမှတ် ၄၀၀၊ ရေအရင်းအမြစ်နှင့် မြစ်ချောင်းများဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၀င်း၊ စီမံကိန်းကြီးကြပ်ရေးရုံး (အဆောင်အမှတ် - ၇)၊ အောက်ပုစွန်တောင်လမ်း၊ စာတိုက်အမှတ် - ၁၁၁၇၁၊ ပုစွန်တောင်မြို့နယ်၊ ရန်ကုန်မြို့၊ ဖုန်း - +95-9263657191, +959-5058307. Email : procurement-unit@airbm.org; cc to component2director@airbm.org; eikyipyarsoe@gmail.com; wittyisoe@gmail.com; aungminaung1977@gmail.com သို့ ရုံးချိန်အတွင်း မေးမြန်းစုံစမ်းနိုင်ပါသည်။
အထက်ဖော်ပြပါလိပ်စာတွင် တင်ဒါဖောင်များကို အခမဲ့ထုတ်ယူနိုင်ပြီး ၁၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ နေ့လည် ၂ နာရီ မတိုင်မီ ပြန်လည်ပေးပို့ရမည်။ နောက်ကျတင်သွင်းလာသော အဆိုပြုလွှာများကို ထည့်သွင်းစဥ်းစားမည်မဟုတ်ပါ။